​Al Shabaab oo weerar ku qaaday Saldhiga Kulbiyow
MUQDISHU, Somalia- Mallayshiyaad katirsan kooxda Al Shabaab ayaa weerar loo adeegsaday qaraxyo iyo dagaal toos ah ku qaaday saldhiga ciidamada Kenya ay ku leeyihiin gobolka Jubbada hoose gaar ahaan degmada Badhaadhe.
Weerarka oo bilowday xalay saq dhexe ayaa wararku waxay sheegayaan in lagu qaaday saldhiga Kulbiyow oo kooxda Al Shabaab weerar xooggan horay uga gaysatay kaasoo lagu dilay ciidamo badan oo katirsan kuwa Kenya.
Khasaaro laxaad leh ayaa lagusoo waramayaa inuu ka dhashay dagaalka iyo qarax ka horeeyay waloow aan ilaa hadda xaqiiqo rasmi ah laga hayn.
Dagaalka ayaa soo gaaray saaka, waxaana madaafiic xooggan is-dhaafsaday labada dhinac.
Isgaarsiinta ayaa ka go'an deegaankaas, iyadoo aan la xaqiijin karin xaaladda rasmiga ah ee uu ku suganyahay saldhigga Kulbiyow.
Sarkaal katirsan ciidamada Jubbaland ayaa sheegay in kooxda Al Shabaab lagu jabiyay dagaal toos ah oo markii hore soo qaadeen kaasoo socday ku dhawaad hal saac, balse markii dambe ay weerar rogaal celis ah kasoo qaadeen dhinaca Bari ee Kulbiyow, kaasoo ay ku jireen ilaa saddex qarax oo loo adeegsaday baabuur.
Majirto wax war ah oo ilaa hadda kasoo baxay dhinacyada dagaallamaya.
27 January 2017 ayay ahayd markii Shabaab weerar ay u adeegsatay Qarax iyo dagaal ay ku qaadeen Saldhigaas oo fariisin u ah ciidamo kasocda Kenya.
Weerarkan ayaa yimid dhowr maalin kadib markii Al Shabaab ay baahisay qaabkii ay u weerareen Saldhigaasn horaantii sannadkan.
AMISOM oo beenisay in lala wareegay Saldhiga Kulbiyow
Soomaliya 03.06.2017. 17:23
MUQDISHU, Somalia- Taliska AMISOM ayaa ka hadlay Weerarkii Xalay Kooxda Al shabaab ku qaadey Saldhiga Ciidamada Kenya ee degmada Kulbiyow, oo ku taalla gobolka Jubbada Hoose.
AMISOM ayaa Boggeeda Twitter-ka ku beenisay Warka ah in Al shabaab mudo saacado ah ay ...
Ciidamada Somalia oo dilay horjooge katirsan ururka Al Shabaab
Soomaliya 29.01.2017. 16:32
​Moses Wetangula: Kenya way ku fashilantay Howlgalka Somalia
Caalamka 28.01.2017. 14:13
Soomaliya 15.02.2017. 00:31
​Al shabaab oo bandhigay weerarkii Kulbiyow
Soomaliya 31.01.2017. 14:10
​Kenya oo ka hadashay weerarkii Kulbiyow
Caalamka 28.01.2017. 11:41